सिन्दुर प्रथा - मधेश लाइभ
गृह पृष्ठ » विचार » सिन्दुर प्रथा
२०७८ श्रावण १६ गते १४:३३ मा प्रकाशित
वर्तमान सामाजिक संस्कार र संस्कृतिको उदार नितिका कारण समाजलाई केही कुरितीहरुले गाजेको छ । पितृसत्तात्मक सोचले यस्ता कुरितीलाई मलजल गरिरहेको छ । परापुर्वकाल देखि धार्मिक, सामाजिक, सांकृतिक रुपले ठुलो महत्व राखेको सिंदुरलाई यसको महत्व र ओचित्यको कसीमा राखेर बुझ्नु जरुरी छ । सिन्दुरको चर्चा हुना साथ हाम्रो समाजमा बैवाहिक कर्मसँग जोडिन्छ ।
सिन्दुरको अर्थ नै विवाहित नारीको पर्यावाची हो जस्तो चलन हामी कहाँ विद्यमान छ । तर, सिन्दुरको महत्व के र किन? के को लागि सिन्दुर? यी र यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोजी गर्ने हो भने धेरै प्रकारका विचारहरु समाजमा पाईन्छ । महिलाहरुले टाउकोको विचोविचमा सिन्दुर लगाउने प्रचलन हाम्रो समाजमा छ । सिन्दुर धारण गर्नुको बहु आयमिक अर्थ छ । यसको धार्मिक, सांस्कृतिक अर्थमा आधारित चलनमा मात्र सिमित छैन, महिलाको सिन्दुर लगाउने बारे वैज्ञानिक अध्यन पनि भएको छ ।
तर कुनै पनि महिलाले सिन्दुर धारण गरेको छ भने उनी विवाहित हुन् भने सहजै अर्थ लाग्छ । उनको टाउको सिन्दुरले धेरै अर्थ पनि प्रष्ट पारेको हुन्छ । हाम्रो सामाजिक चलनअनुसार सिन्दुर लागाएकी महिला हेर्ना साथ उनी सुहागन हुन, उनी खुसी छिन, उनी त्यागी र समर्पित छन, उनी पतिद्वारा संरक्षित छिन, यावत यावत ।
सिन्दुर धारण गरेकी महिलालाई कुनै पुरुषको अर्धांगिनीको रुपमा चिनिन्छ । त्यो ठिकै पनि हो तर जुन पुरुषले महिलाको सिउँदोमा सिन्दुर सजाउँछ त्यो पुरुषलाई आफ्नो अर्धांगिनी स्वीकार गर्न उनी तयार छन् कि छैनन त्यस बारेको चाँसो पाइदैन । जे जस्तो भए पनि ती पुरुषलाई महिलाले स्वीकार गर्नै पर्ने बाध्यता हाम्रो समाजमा छ । तर जुन महिलालाई सिन्दुर लगाएर अर्धांगिनी बनाएको हुन्छ उ पुरुषले श्रीमान हुने सबै धर्म र कर्तब्य पालन गरेको छ कि छैन थोरै बिषलेशन जरुरी छ ।
हाम्रो समाजमा सिन्दुरसँग जोडिएका कतिपय चर्चा परिचर्चाहरु सुनिन्छ । कुनै महिलाले नचाहदा नचाहदै पनि कुनै पुरुषले बलजफ्ती वा चोरी लुकि पनि उसको टाउँकोमा एक चुटकी सिन्दुर हाली दियो भने ती महिलालाई उसकै भएर बस्नु पर्ने हुन्छ । यहि प्रसंगलाई अझै प्रष्टाउने हो भने महिला जातीको सन्दर्भमा शारीरिक सम्बन्ध सर्वाधिक महत्व राख्छ । बिवाहभन्दा पहिलाको वा श्रीमान बाहेकका पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध महिलाको लागि अभिशाप नै हो । एक चुटकी सिन्दुर हालेर बिवाह गरेका पुरुष चाहे जस्तो सुकै अव्यवहारिक होस्, गैर जिम्मेवार होस् त्यसको वास्ता समाजलाई हुँदैन । तर उनी प्रतिको समर्पण महिलाले देखाउनै पर्याे । तर, जस्तो सेवा भावमा समर्पित अर्काे पुरुष जो हदैसम्मको माया गर्ने होस् त्यस्तो पुरुषसँगको सम्बन्धलाई समाजले स्वीकृति दिदैन किन भने उनले ती महिलाको सिउदोमा सिन्दुर मात्र हालेको हुदैन ।
यसरी भन्दा त महिला र पुरुष बिच शारीरिक सम्बन्ध राख्न स्वीकृति दिने एक मात्र माध्यम हो सिन्दुर । जाबो एक चुटकी सिन्दुरको त्यत्रो महत्व? हाम्रा पुर्वजहरु बिज्ञान समेतलाई आधार बनाएर उच्च बिचारका आधारमा बसालेका चलन र रिवाजहरुलाई दुरुपयोग गरेकै कारण दुर्गामी महत्व राख्ने केही रितिहरु हाल कुरितीमा परिणत हुँदै गएको तर्फ हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
यस्तै कुरितीका कारण एक चुटकी सिन्दुर हालेकै कारण पुरुषहरुले महिलालाई गुलाम बनाएको जस्तो व्यवहार गरेको उदाहरण हाम्रो समाजमा प्रस्तै पाइन्छ । हाम्रा पुर्वजहरुले बसालेका रिवाज अनुसार एक चुटकी सिन्दुर सिउँदोमा हालेर पुरुषले अर्धांगिनी बनाएको महिला प्रति निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीहरु धेरै पुरुषहरुले बिर्सेको पाइन्छ । श्रीमतीको हरेक आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने, उसको जिविकाको जोहो, उसले चिताएको माया, हरेक प्रकारले उसको सुरक्षाको गर्नु पर्ने जस्ता दायित्वहरु निर्वाह गर्न पुरुषहरु चुके कै कारण पवित्र मानिएको बैवाहिक बन्धन र त्यसको एक मात्र माध्यम सिन्दुरको महत्व आज घटदै गएको भन्दा अतियोक्ति नहोला ।
हाम्रो हिन्दु धर्म र सनातन समाजमा पवित्र बैहिक बन्धन र त्यसमा सिन्दुरको प्रचलन करिब पाँच हजार बर्ष पुरानो छ । सनातन धर्मका प्रकाण्ड बिद्वान श्री रबीशंकर जीले सिन्दुरको धार्मिक महत्व बारे धेरै भन्नू भएको छ । वहाँकै शब्द सापटी लिने हो भने सिन्दुर लक्ष्मीको प्रतीक हो । महिलाको माथामा सिन्दुर लगाउदा त्यो घरमा लक्ष्मीको बास हुन्छ । सिन्दुरलाई मांगलिक पनि भनिएको छ । जुन पुरुषको मंगल ग्रह कमजोर हुन्छ, सफलता पाउँदैन, धनको संचय कमजोर हुन्छ उनको श्रीमतिले लगाउने सिन्दुरले त्यो पुरुषलाई फायदा पुर्याएको हुन्छ । यसलाई पुष्टि गर्न रामायणको एउटा किवदन्तीलाई पनि लिन सकिन्छ । सिताले सधै माथामा सिन्दुर लगाउँथिन ।
एक दिन हनुमानले हेरेछ र सीतासँग सोधे छ कि सिन्दुर माथामा किन लगाउँनु हुन्छ । सीताले भनिन् सिन्दुर लगाउदा राम खुसी रहनुहुन्छ । अनि हनुमानले आफ्नो जिउभरि सिन्दुर दल्नु भयो र आज पनि एक मात्र जिउँदो भगवान हनुमानको पुजामा सिन्दुरको सबैभन्दा धेरै महत्व छ । हाम्रा पुर्वजहरुहरुले बसालेका यस्ता प्रचलनहरुमा बैज्ञानिक आधार पनि छ । सिन्दुर अर्गेनिक वा प्राकृतिक बस्तु भए पनि यसको बैज्ञानिक रुपले रसायनिक अध्ययन पनि भएको छ । सिन्दुरको रसायनिक नाम मर्क्युरिक सल्फाईट हो । यसमा अक्सिजनको मात्रा प्याप्त पाईन्छ । प्रचलन अनुसार महिलाहरुले नाकमाथिको माथाको बिचोबिच टाउकोमा सिन्दुर लगाउँछिन ।
टाउकोको त्यो भाग असाध्य कोमल हुन्छ । त्यहाँ पुट्युटरी ग्ल्याण्ड हुन्छ । त्यहाँ सिन्दुर लगाउदा सिन्दुरमा बिद्यमान रहेको परा यानी मरक्युरीले राम्रो असर गरेको हुन्छ । परा नामको रसायणले त्यो ग्रन्थीमा पार्ने प्रभावले महिलाहरुको रक्तचाप र तनावलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै छालाको सुन्दरता अनुहारमा चमक ल्याउन पनि मद्दत गर्छ । नियमित माथामा सिन्दुरको प्रयोगले अनुहारमा लामो समयसम्म झुर्री पर्न दिदैन ।
भनिन्छ, बैवाहिक जिवनमा बाँधिएपछि महिलाको पुर्नजन्म हुन्छ । नयाँ घर परिवेशमा घर गृहस्थीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि महिलालाई तनाव हुनु स्वभाविक हो । त्यहि तनावबाट मुक्ति हेतु र हिम्मत बढाउने उदेश्यकासाथ पिट्युटरी ग्रन्थी भएको टाउकोको भागमा सिन्दुर लगाउने प्रचलन हाम्रा अग्रजहरुले बसालेको हो ।
वैदिक शास्त्रका अनुसार बैबाहिक कर्ममा सबैभन्दा महत्वपुर्ण कर्म हो सिन्दुरदान । महिलाको माँघ (सिउदो) मा सिन्दुर भर्दा एउटा मन्त्र उच्चारण गरिन्छ ….
सम्राज्ञी श्र्वसुरे भव, सम्राज्ञी श्र्वश्रवाँ भव ।
ननान्दरि सम्राज्ञी भव, सम्रज्ञी अधि देवषु ।।
ईहेव स्तां मा वि योष्टं , विश्र्वासायुर्व्य श्रुतम ।
क्रिडान्तौ प्र्त्रैर्नप्तृभिर्माैमान्नौ स्वप्तकौ ।।
यानी सम्राज्ञी बन्नु शसुर जीको, तिमी बन्नु सासुको सम्राज्ञी, सबै नन्द र देवरको स्नेह प्राप्त गर्दै राज्यको सम्राज्ञी बन्नु । हे नव दम्पती प्रेम आनन्द र आाकर्षणको सदैव साथ रहोस्, तिमी पुर्ण आयु आनन्द र प्रेममा बिताउ, आंगनमा सबै मिली जुली प्रेममा रहनु, प्रिय पुत्र र पौत्र को शिशु क्रीडा तिम्रो जीवनमा उल्लास बढाओस्, तिमीलाई प्रेम, धन र आयु बढाउने कृति मिलोस् ।
यस प्रसंगमा पनि नारी जातीलाई हाम्रा पुर्वजहरुले उच्च सम्मान दिदै जति जिम्मेवारीहरु दिएको छ । त्यसलाई निर्वाह गर्न पुरुषलाई पनि समान जिम्मेवारी छ । तर, अचेल पुरुषहरुले यस्ता महान कर्मको अबमुल्यन गर्दै माँघमा सिन्दुर भरेपछि आफ्ना जिम्मेवारीहरु बिर्सिने गर्दछ । सिन्दुर भर्ना साथ महिलालाई जतिबेला जसरी मनलागे उपयोग गर्ने पुरुष प्रबृतिले हाम्रा महान पुर्वजको अपमान भईरहेको जस्तो स्थिति छ ।
आफ्नो श्रीमानको सदैव हित चिताउदै उनको लामो आयु, सुस्वास्थ, सफलता, घरमा लक्ष्मीको बासको कामनासहित सधै मांगलिक प्रतिक सिन्दुरवाट माँघ भर्छन महिला तर, पुरुष वर्गले पनि थोरै यसको महत्व बुझेर महिलाको यस समर्पणको ख्याल राखि दिए, कम हुँदै गएको सिन्दुर लगाउने परम्परा को प्रवद्र्धनमा त मद्दत पुग्ने नै थियो अन्ततः यसले परुषहरुलाई नै फायदा पुग्ने थियो ।
मधेसमा शक्तिशाली बन्दै उपेन्द्र Next
जसपा संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र [...]